Repoblikan'i Kiribati: fizahan-tany vaovao mbola tsy voakitika 1800 kilaometatra avy eo Hawaii
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia Kiribati » Repoblikan'i Kiribati: fizahan-tany vaovao mbola tsy voakitika 1800 kilaometatra avy eo Hawaii
Oktobra 22, 2019
Paradisa amin'ny nosy Pasifika lavitra mbola tsy voakitika miaraka amin'ireo olona sariaka mandray ireo mpitsidika toa ny fianakaviana. Zava-misy iainana amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany fizahan-tany any Kiribati. Ny tany am-boalohany tsy lafo, tsy voakitika, no soloin'ny Repoblikan'i Kiribati toerana fitsangatsanganana.
Kiribati dia fanjakana manana fiandrianana ao Micronesia any afovoan'ny Oseana Pasifika. 1856 no misy azy kilometatra miala an'i Honolulu. Ny mponina maharitra dia maherin'ny 110,000 fotsiny, ny antsasany mahery amin'izy ireo dia monina ao amin'ny Tarawa Atoll. Ny fanjakana dia misy atol sy nosy haran-dranomasina 32 ary nosy haran-dranomasina iray lehibe, Banaba.
Nilaza ny governemanta Kiribati fa ny nosy lavitra an'i Nikumaroro dia mety hanana ny toeran'ny micro fizahantany - izany dia satria ekipa manam-pahaizana mino fa teo no nianjeran'ilay fiaramanidina an'i Amelia Earhart, ilay fiaramanidina amerikana, na dia tsy nahita aza ny dia nataon'izy ireo. misy porofo mivaingana manohana an'izany.
Nikumaroro, na Gardner Island, dia ao amin'ny nosy Phoenix, Kiribati, any amin'ny Oseana Pasifika andrefana. Izy io dia atoron-dranomasina lavitra, lava sy telozoro ary misy zavamaniry be dia be ary farihy lehibe afovoan'ny ranomasina. Nikumaroro dia eo amin'ny 7.5 km ny lavany ary 2.5 km ny sakany.
Nanjavona Ramatoa Earhart sy ny mpanamory fiaramanidina Fred Noonan raha nanandrana nitety an'izao tontolo izao tamin'ny 1937 taorian'ny niaingan'izy ireo avy tany Lae any Papua New Guinea ankehitriny.
Tiiroa Roneti ao amin'ny Phoenix Islands Protection Area, izay mitantana an'i Nikumaroro, dia nilaza tamin'ny Pacific Beat ny drafitra maharitra hataon'izy ireo dia ny hamolavola tranokala fizahan-tany micro izay mitrandraka amin'ny rohy mankany amin'ny mistery Earhart. Ilay nosy tsy onenana dia iray amin'ireo valo mandrafitra ny Phoenix Group, izay nambara fa toerana vakoka manerantany.
Fitsangatsanganana iray tamin'ny volana aogositra, novatsian'ny tambajotra fahitalavitra National Geographic ary notarihin'ilay lehilahy nahita sambo sambo Titanic, dia tsy nahita porofo mivaingana momba ny fiaramanidin'i Amelia Earhart. Miandry porofo ny governemanta eo an-toerana izay afaka manaporofo fa nianjera tany akaikin'i Nikumaroro i Earhart.
"Miandry ny valin'ny fitsangatsanganana izahay izay afaka mampifandray an'i Nikumaroro ho iray amin'ireo toerana mety hanjavona farany ho an'i Amelia Earhart," hoy Andriamatoa Roneti.
Ny nosy Nikumaroro dia tsy misy mponina intsony ankehitriny fa efa nampiasain'ny governemanta mpanjanatany britanika tamin'ny taona 1940. Niala i Nikumaroro tamin'ny taona 1950 noho ny tsy fahampian'ny rano ary nipetraka tao amin'ny Nosy Solomon indray ny vahoaka.
Nanjary tsy miankina tamin'ny Fanjakana Mitambatra i Kiribati tamin'ny taona 1979. Ny renivohitra, South Tarawa, izay izao no faritra be mponina indrindra, dia misy nosy kely maromaro, ampifandraisin'ny andian-dàlana maromaro. Ireo dia manodidina ny antsasaky ny faritry ny Atol Tarawa.
Kiribati dia mpikambana ao amin'ny Community Pacific (SPC), Commonwealth of Nations, ny IMF, ary ny Banky Iraisam-pirenena, ary lasa mpikambana feno ao amin'ny United Nations tamin'ny taona 1999.
I Kiribati dia misy atoll 32 sy nosy mitokana iray (Banaba), mipaka hatrany amin'ny hemisfera atsinanana sy andrefana, ary koa ny hemisfera avaratra sy atsimo. Io no firenena tokana miorina ao anatin'ny hemispera efatra. Ny vondrona nosy dia:
Banaba: nosy mitokana eo anelanelan'i Nauru sy ny Nosy Gilbert
Nosy Gilbert: seranana 16 misy 1,500 kilometatra eo ho eo (932 mi) avaratr'i Fidji
Nosy Phoenix: nosy amoron-dranomasina 8 sy nosy haran-dranomasina misy 1,800 kilometatra eo ho eo (1,118 mi) atsimoatsinanan'i Gilberts
Nosy Island: seranana 8 sy haran-dranomasina iray, manodidina ny 3,300 2,051 kilometatra (XNUMX XNUMX mi) atsinanan'ny Gilberts
The Biraon'ny fizahantany nasionalin'i Kiribati (KNTO) dia tompon'andraikitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay mba hamporisihana ireo mpandeha ho tonga any Kiribati ary handany fotoana hijerena ny firenentsika. Notarihinay ny fitsipiky ny faharetana, ny fampandrosoana ara-toekarena ary ny fitehirizana ny kolontsaina sy ny fanehoana. Tianay ny hahita ny indostria misy antsika mamirapiratra toy ny manga, maitso ary fotsy izay maneho ny hatsaran'ny firenena.
Kiribati dia tsy toerana fialantsasatra ho an'ny rehetra. Ilay mpitsangatsangana na mpanjono matotra sy feno fanoloran-tena dia hahazo valisoa amin'ny fitsidihany miaraka amin'ny traikefan'ny olona mandray sy mahafinaritra, trondro tsy manam-paharoa sy ny fanamby hisamborana azy ireo, ary ny fomba fiainana izay lavitra ny andronao araka izay azonao atao. Ireo mpizaha tany izay mitady bara filomanosana, efitrano fandraisam-bahiny, ary lamba famaohana fluffy dia tsy mila apetraka.
morontsiraka kiribati 2
Ao amin'ny angano Pacific Island, ny fiandohan'ny olombelona dia mitantara ny angano noforonina, miaraka amin'ireo andriamanitra Turtle sy Spider no namorona izao rehetra izao. Ny angano sasany dia manaiky azy ireo ho andriamanitra an-tanety, izay notafihan'ireo andriamanitra Eel sy Stingray, izay namorona izao rehetra izao.
Ny angano nentin-drazana dia mitantara ireo fanahy nifindra avy tany Samoa nankany amin'ny Nosy Gilbert. Tonga fanahy antsasaky ny fanahy sy antsasaky ny fanahy ireo fanahy, ary avy eo elaela niova ho olombelona. Betsaka ny olona ao Kiribati no mino fa fanahy ny razambeny, ny sasany avy any Samoa, ary ny sasany avy any Gilberts.
Fantatra amin'ny maha indigeny azy hoe "Tungaru", ny tantara maoderina ao Kiribati dia heverina fa hanomboka amin'ny fahatongavan'ireo Micronesians ao Pasifika atsimo, izay natao teo anelanelan'ny 200 sy 500 AD. Na izany aza, misy porofo manamarina ny fifindra-monina avy any amin'ny faritra Azia atsimo atsinanana / Indonezia talohan'io, nifindra tany Pasifika tokony ho 3000 taona lasa izay.
Tao anatin'ireto nosy ireto dia nisy kolontsaina Mikronesia nanjary (na dia tsy nantsoina hoe Micronesian aza mandra-pahatongan'ny Eoropeanina nampiditra io anarana io taty aoriana), dia nasiana singa avy amin'ny kolontsaina polineziana sy melanesianina koa noho ny fanafihana nataon'ny firenena mpifanolo-bodirindrina toa an'i Samoa, Tonga ary Fidji. Ny kolontsaina koa dia voataona tamin'ny alàlan'ny fanambadiana teo amin'ny firenena samy hafa, ary taty aoriana dia avy amin'ny fitaoman'ireo pasitera 'Polineziana'.
Betsaka ny traikefa an-tsehatra hitranga amin'ireo nosy sy ny manodidina izay mandrafitra ny firenena Kiribati. Ao amin'ny firenena manana rano lehibe indrindra amin'ny tahan'ny tany eto amin'izao tontolo izao, ny rano dia singa iray lehibe amin'ny fiainan'ny I-Kiribati, ary ho an'ny mpitsidika rehetra.
Fishing dia kilasy eran'izao tontolo izao - mifototra amin'ny Nosy Kiritimati (Krismasy), iray amin'ireo toerana vitsy eto an-tany afaka ahafahanao manidina trondro sira, ho an'ny trondro mahery miady! Ny rano lalina kokoa manodidina an'i Kiritimati sy ny Nosy Gilbert dia toerana tsara ihany koa ho an'ny jono lalao manaparitaka firaketana.
Ho an'ireo izay mitady kolontsaina vitsivitsy dia be ny zavatra hita sy azo atao manerana ny nosy. Kolontsaina any Kiribati dia mbola tsy voatsinjara tsara - ny fomba tsara indrindra hiainana kolontsaina somary mbola tsy voakitika dia ny sidina an-trano na amin'ny sambo mitaingina any amin'ny nosy ivelany ary hihaona amin'ireo olona sariaka hatrany. Raha tonga amin'ny fotoana mahamety ny taona ianao dia mety ho afaka hijoro amin'ny fankalazana eo an-toerana, amin'ny fialantsasatra ara-pinoana toa ny paska na krismasy; na fankalazana nasionaly toa ny Fahaleovantena Kiribati. Raha te-hitondra kely ny kolotsaina any an-trano miaraka aminao ianao, ny asa-tanany mahavariana amidy dia mbola nanohy ny fomba nentim-paharazana.
Ny vondrona nosy Gilbert dia mpampiantrano maromaro Toerana manan-tantara ny Ady lehibe II. Tarawa, Makin (antsoina ankehitriny hoe Butaritari), Abemama (koa ny nosy ranomasin'i Banaba) dia notafihin'ny Japoney tamin'ny 1941, fotoana fohy taorian'ny nanapoahan'izy ireo baomba an'i Pearl Harbor. Taorian'ny nanamafisan'ny Japoney ny atoll, tamin'ny 1942 sy 1943 dia nanao fanafihana lehibe ny miaramila amerikana amerikana mba hanesorana ny fisian'ny japoney. Androany dia azo tsidihina ny sisan'ny ady sy manda.
Kiribati koa dia mpampiantrano ny vondrona nosy Phoenix - ao anatin'izany ny Faritra voaaro ny nosy Phoenix (PIPA), faritra arovana an-dranomasina lehibe indrindra eto an-tany. Ho an'ireo tia vorona, ity faritra ity dia manana toeram-pisakafoanana sy fiompiana karazam-borona an'ala 19. Ho an'ireo izay tia azy ao anaty rano, kianja filalaovana midadasika misy trondro maro karazana (karazany 509 voatondro) sy fiainana an-dranomasina hafa (biby mampinono, antsantsa, invertebrata, fiainana zavamaniry) amin'ny isa marobe, any amin'ny toeram-ponenana mandehandeha, mandehandeha ary misy ny farihy.
Kiritimati (Nosy Krismasy)
Kiritimati dia mpampiantrano teboka volamena, dimy metatra sy vatohara ary fantsona eo anelanelan'ny vohitra London sy Paris. Ity velarina ity dia heverina fa manana onja 24 azo alefa - miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny surf amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Martsa. Ny mamontsina dia mamely an'i Kiritimati eo amin'ny iray na roa andro aorian'ny hahavony an'i Hawaii - ny fivontosana 8 "ka hatramin'ny 12" ao amin'ny Sunset Beach any Hawaii dia hiteraka tarehy madio 6 "ka hatramin'ny 10" ao Kiritimati iray ka hatramin'ny roa andro aorian'izay. Amin'ireo fiatoana 24, ny roa ampahatelony dia mpinamana amin'ny fantsona lalina sy fasika misy vatohara malemy. Ny fahatelo hafa kosa dia manana vatam-bato ambany ary natao ho an'ny mpizaka efa za-draharaha ihany.
Ny hotely dia misy eo anelanelan'ny $ 25 sy $ 75 isan'alina. Izy io dia mahatonga an'i Kiribati ho toerana fialantsasatra mora vidy.
Ny fifandraisana sidina mankany Kiribati dia misy avy any Nadi, Fiji ary Honolulu, Hawaii. USA.
Ahoana ny fomba hankafizana ny harena an-dranomasina sy ny fahamendrehana any Palawan?
Miverina ny fampiasam-bola avo any Zimbaboe? Drafitra fanondrahana sy famokarana fambolena